Apple namoaka Xcode 7.3.1 Master volamena ho an'ny mpamorona | Avy amin'ny mac aho
Nanambara i Apple omaly ny famoahana ny kinova Gold Master talohan'ny kinova farany an'ny Xcode kinova 7.3.1 natokana ho an'ny mpamorona. Ity fanavaozana ity dia mitondra ny isan'ny Manorena 7D1012 ary mifantoka indrindra amin'ny fanamboarana bibikely mba hahatonga ny famoahana manaraka ho an'ny besinimaro.
Tamin'ny volana lasa teo dia namoaka Xcode 7.3 i Apple taorian'ny fotoam-pitsapana lava. Ity fanavaozana ny Xcode 7.3 nahitana ireo SDK farany indrindra ho an'ny iOS 9.3, watchOS 2.2 ary OS X 10.11.4 ary tafiditra ao koa ny kinova Swift 2.2 farany.
Misy kaody voadio bebe kokoa mba hahafahan'ny mpamorona manoratra ny programa misy azy ireo haingana sy mahomby kokoa. Izy io koa dia manamora ny famoronan'ireo mpamorona atiny ho an'ny Apple Watch, satria mandinika ny mifamadika haingana eo anelanelan'ny famantaranandro nifandray tamin'ny iPhone.
Xcode 7.3.1 GM dia misy ao tranokala mpamorona avy amin'ny Apple, azonao atao ny manamarina ny lisitry ny fanovana etsy ambany:
• Ny setting Enable Clang Module Debugging build dia nesorina tamin'ity famotsorana ity, manamboatra olana izay mety hahatonga ny Xcode hianjera na haneho fampahalalana tsy feno amin'ny fijerin'ny variables. (25535528)
• Namboarina bibikely izay kendren'ny fitaovana haingam-pandeha haingam-pandeha izay -ObjC mankany amin'ny rohy dia tsy hampifandray rehefa atsangana. (25447991)
• Namboarina olana iray izay hamelana ny fahafaha-manaonao ao amin'ny editor Xcode hamela ilay fahazoan-dàlana mifandraika aminy izay mamela ao anaty fampiharana hatrany. Mety mila misintona indray ny mombamomba anao manome ny lisitry ny fahaiza-manao nohavaozina ianao aorian'ny fandavana ny fahafaha-manaonao. Xcode dia tsy mandika ny ankamaroan'ny zon'ny mpamorona ho lasa sonia kaody amin'ny fotoana anaovana azy. Ireo lohateny ho an'ny Wallet, GameCenter (ho an'ny OS X), Data Protection, ary ny fampandrenesana Push dia mbola adika amin'ny piraofilina. Ny zon'olombelona hafa rehetra dia tokony hambara amin'ny alàlan'ny tabilao Capability ao amin'ny mpampanonta ny Xcode. (24771364)
• Ny bokotra Archive Organize Download dSYMs dia misintona tsara ny dSYMs ho an'ireo kinova fampiharana nakarina miaraka amin'ny bitcode. (25430147) Interface Builder
• Mamaha olana momba ny fampisehoana rehefa manokatra tabilao na xib miaraka amina sakana maro be. (25314053)
• Ny famaranana kaody dia mampiseho ny lohateny feno amin'ny pop-over famaranana kaody. (25530060) Famafana
• Mamaha olana mifandraika amin'ny NSSegmentedControls izay nahatonga ny mpijery debugger ho banga. (25388091)
• Ny fanitsiana ny mpandika teny LLDB Python dia mamela azy hanao tsara ny I / O ao anatin'ny Xcode, ahafahan'ny komandy "script" miasa araka ny nampoizina. Ny vokatra vita pirinty avy amin'ny script Python dia hita ao amin'ny console Xcode debug. (25448007)
• Mamaha olana iray izay nahatonga ny Xcode nianjera taorian'ny nanafarana toerana iray. (25395822)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Apple namoaka Xcode 7.3.1 Gold Master ho an'ny mpamorona
Miseho ireo mari-pahaizana voalohany amin'ny MacBook 12 "vaovao
Raha mandinika ny tranokalan'ny Apple isika dia afaka mahatsapa ny fahatongavan'ny volamena rose amin'ny MacBook